Ifektri yeComprifugal Pump - iTshayina yeCentrifugal Pump abavelisi, abaXhasi
I-KQW Inqanaba elinye leMpompo yeCentrifugal
Isetyenziswe kwimozulu, ukufudumeza, amanzi acocekileyo, unyango lwamanzi, iinkqubo zokupholisa kunye nokuqandisa, ukujikeleza kolwelo, kunye namanzi abandayo angonakalisiyo kunye nokuhambisa amanzi ashushu kwicandelo lokuhambisa amanzi, uxinzelelo kunye nokunkcenkceshela. Ukuqina okunganyibilikiyo kulwelo yinto, umthamo wayo awudluli kwi-0.1% yevolumu yeyunithi, ubungakanani bamasuntswana <0.2mm.
D / MD / DF Amanqanaba Amaninzi Pump Pump
I-D Horizontal Multi-Stage Centrifugal Pump, i-MD yokuthintela ukumelana nempompo yamanqanaba amaninzi kwimpompo yamalahle kunye ne-DF Corrosion-Resistant Multistage Centrifugal Pump. Ngenxa yokusebenzisa itekhnoloji ephezulu kunye noyilo, i-D / MD / DF inezibonelelo ezininzi. Zingasetyenziswa kwizicelo ezininzi ezahlukeneyo.
Uluhlu lwe-DG olwahlulahlula impompo ye-centrifugal pump isebenzisa iibholiti zovalo ukudibanisa ukungena kwamanzi, icandelo eliphakathi kunye necandelo lokuphuma kwimveliso yonke. Isetyenziswa emanzini okuhambisa amanzi kwibhoyila kunye nakwezinye iqondo lobushushu eliphezulu lamanzi acocekileyo. Olu luhlu luneentlobo ezininzi ezahlukeneyo zeemveliso, ke linoluhlu olukhulu lwezicelo. Kwakhona, inokusebenza okungcono kunye nokusebenza okuphezulu kunenqanaba eliphakathi.
Imodeli ye-KQDP / i-KQDQ yeepompo zokuxhasa ezime nkqo. Ugcino lwamandla, ukhuselo lokusingqongileyo, olukhuselekileyo noluthembekileyo zezona zinto ziluncedo ziphambili. Ingadlulisa iindidi ezahlukeneyo zolwelo, kwaye inokusetyenziselwa ukuhambisa amanzi, uxinzelelo kwimizi-mveliso, ukuhanjiswa kolwelo oluhamba kwimizi-mveliso, ukujikeleza komoya, ukunkcenkceshela, njl.njl. iimeko.
Unikezelo lwamanzi oluphakamileyo, ukwakha umlilo ukukhusela umoya, ukujikeleza kwamanzi omoya ojikelezayo, ukuhambisa amanzi kwinkqubo yobunjineli, ukujikeleza kwamanzi okupholisa, ukuhambisa amanzi kwibhoyila, ukuhambisa amanzi kunye nokuhambisa amanzi, Unkcenkceshelo, izityalo zamanzi, izityalo zephepha, izityalo zamandla izityalo zamandla, ezentsimbi, ezemichiza, iiprojekthi zolondolozo lwamanzi, unikezelo lwamanzi kwiindawo zokunkcenkceshela, njalo njalo.
Ukongeza, ukusetyenziswa kwezinto ezinganyangekiyo ukubola okanye ukunganyangeki kunokuhambisa amanzi amdaka avela kwimizi-mveliso, amanzi olwandle, kunye namanzi emvula aqukethe okuqinileyo okuxhonyiweyo.
Isetyenziswa ikakhulu kwizakhiwo eziphakamileyo, ekuhlaleni, endlwini, ezibhedlele, ezikolweni, kwizikhululo zeenqwelo moya, kwiivenkile zesebe, kwiihotele, kwizakhiwo zeofisi njalo njalo.
Zisetyenziswa ikakhulu kwi Ukucokisa ioyile, ipetroli, imveliso yamachiza, ishishini lokulungisa amalahle, ishishini lephepha, ulwandle, ishishini lombane, ukutya, amayeza, ukhuselo lokusingqongileyo kunye namanye amashishini.
I-KQL ngqo-idityaniswe kumgca weSigaba esinye sePompo yeCentrifugal Pump
Imodeli ye-KQL zidityaniswe ngokuthe ngqo kwiipompo zecandelo le-centrifugal. Zisetyenziselwa ikakhulu imeko yomoya kunye nokufudumeza. Uyilo oluyingqayizivele luyinika izibonelelo zokuthembeka okuphezulu kunye nokusebenza okuphezulu.
I-XBD yokuCima umlilo
Isetyenziselwa umsebenzi wokucima umlilo kwimigangatho eyahlukeneyo kunye nokumelana nemibhobho.